Ogaden News Agency (ONA) – Hawlgaladii ugu dambeeyay ee CWXO oo cadawga lagu jabiyay
Hawlgaladii ugu dambeeyay ee CWXO oo cadawga lagu jabiyay
Posted by ONA Admin	/ November 1, 2011
Wararka aan ka helayno X/dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in dagaalo dhawaanahan ka dhacay deegaamo ka tirsan dalka Ogaadeenya khasaare naf iyo maalba leh loogu gaystaya ciidamada cadawga. Dagaaladan oo u badnaa weeraro qorshaysan oy fuliyeen CWXO ayaa muujinaya awooda ay u leeyihiin naftood-hurayaasha JWXO inay cadawga ku muquuniyaan goobaha dagaalada
Dagaalada aan helnay warbixinadooda ayaa waxay ka kala dheceen;
16/10/2011 dagaalo mir ah ka kala dhacay Horahawd oo ka tirsan Jigjiga iyo degmada Dhuxun waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
18/10/2011 dagaalo weerarar ah ka kala dhacay Hora-hawd oo katirsan Jigjiga iyo Cadalay oo ka tirsan Dhagaxbuur waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 15 askariwaxaana lagaga dhaawacay 17 kale
19/10/2011 dagaal ka dhacay deegaanka Sasabane oo ka tirsan degamada Dhagaxbuur waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 4 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale
20/10/2011 weeraro ka kala dhacay deegaanada kala ah Fariiqyada, Sasabe, Jiiro-adhi oo kawada tirsan degmada Dhagaxbuur iyo Garaasalay oo ka tirsan degmada Jigjiga waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 19 askari waxaana lagaga dhaawacay 23 askari. Waxaa dagaaladaas lagag furtay cadawga saanad fara badan iyo raashin, ka dib markii ay ka carareen ciidamada cadawgu fadhiisimadoodii.
22 10/2011 dagaal ka dhacay deegaanka Ceelo obo oo ka tirsan degmada Baabili waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay hal askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
23/10/2011 dagaal ka dhacay deegaanka Ceel xaar oo ka tirsan degmada Baabili waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay hal askari waxaana lagaga dhaawacy mid kale
25/10/2011 waxay CWXO ku toogteen gudaha tuulada Dhuure maalin cad askari ka adeeganayay magaalada gudaheeda taas oo muujinaysa kalsoonida naftood-hurayaasha.
Dhanka kale waxaa jira dhibaatooyin ay ciidamada cadawgu gaadhsiiyeen shacbiga Ogaadeenya todobaadyadii tagay taasoo dhacda markay khasaare xoogan kala kulmaan goobaha dagaalka. Dhibaatooyinka shacabka ayaad kala socon doontaan warbaahinada ururka ee maqalka iyo muqaalka ah iyadoo loo gudbin doono haya’daha caalamiga ah ee qaabilsan arimahaa.